Kismaayo News » Dastuurka oo loo qaadayo afti dadweyne
Dastuurka oo loo qaadayo afti dadweyne
Kn: Xitaa marka ay dastuurka cusub meelmariyaan ergada Xamar ku kulmeysa bisha dambe, wali waxa uu sii ahaan doonaa mid aanan rasmi ahayn illaa afti dadweyne lagu meelmariyo.
Kani waa mid ka mid ah qodobadii lagu heshiiyey shirkii saxiixayaasha Roadmap-ka ee Nairobi kusoo gabogaboobey. Qodobada kale ee meesha looga hadlay ayaa waxaa ka mid ah tirada uu noqonayo baarlamaanka, taasoo inkasta oo horey loogu heshiiyey in ay ahaato 225 hadane shirkii Istanbul kadib ay soo baxeen aragtiyo kale oo sheegaya in laga dhigo 275 iyo gole odayaal oo ka kooban 135 sida ay ku baaqeen odayaasha Xamar. Madaxweynaha ayaa dhanka kale saxiixay nuqulka kama dambeyska ee dastuurka taasoo micnaheedu yahay in lasoo dhamaystirey dastuurka qoraalkiisa. Hoos waxaa ah baaq kasoo baxay shirka Baaqa Wadajir ah ee Wadatashigii Saxiixayaasha Khariidada Dhameystirka Xilliga KMG
Nairobi, 22 June 2012 Saxiixayaasha khariidada dhameystirka kumeelgaarka Soomaaliya, waxay kulan ku yeesheenNairobi, Kenya laga bilaabo 20 ilaa iyo 22 June, 2012 si ay wadaxaajood dheeraad ah uga sameeyaan higelinta khariidada dhameystirka kumeelgaarka Soomaaliya. So gaar ah waxay diiradda u saareen sidii hoey loogu dhigi laa hifelinta waxyaabihii ay ku heshiiyeen shirkii Addis Ababa, Thiopia, ee 21dii ilaa 23dii May kaasoo looga gol lahaa dedejinta tubta nabadda. Shirka waxaa sahashay Quruumaha midoobay, gaar ahaan u qaybsanaha arrimaha Somalia ee Xoghayaha Qaramada Midoobay, Danjire Augustine P. Mahiga.
a) Saxiixayaasha Khariidada Dhameystirka Xilliga KMG ah markay ka doodeen dib-u-eegidna ku sameeyeen dhameystirka KMG ah
oo ay kasoo shaqeeyeen Guddiga Farsmo ee Dib-u-eegidda Dastuurka ee lagu soo dhisay heshiiskii Addis Ababa ee qabsiimay
May 21-23, 2012.
1. Protokoolka Guddiga Farsamo ee soo xulidda xubnaha
2. Protokoolka dhisaya Guddiga sahlaya socodsiinta
hawlaha Farsamo (Technical Facilitation Committee)
2. Qabyo-qoraalka Dastuurka KMG ah Saxiixayaasha ayaa si wadajir ah u saxiixay nuqulkii ugu dambeeyey ee Qabyo-Qoraalka Dastuurka KMG ah oo ay soo dhamaystireen Guddiga Farsamo ee Dib-u-Eegida Dastuurka (Technical Revision Committee) ee Addis Ababa. Kani hadda, waxaa weeye, Dastuur KMG ah ee Somalia. Guddiga kor ku xusan magaciisa waxaa loo badalay Guddiga Farsamo ee Fududeynta Howlaha (Technical Facilitation Committee), waxaana Gudoominaya Wasiirka Arrimaha Dastuurka iyo Dib-u-heshiisiinta ee DFKMG ah. Inta aan Qabyo-qoraalka Dastuurka KMG ah la hordhigin Ergada Ansixinta Dastuurka, Hey’adda IFCC ayaa qaban doonta wacyi-gelin si loo kordhiyo aqoonta Dadweynaha ee arrimaha Dastuurka KMG ah, wacyigalin taasoo qaadan doonta muddo dhan 4-berri. IFCC ayaa Qabyo-qoraalka Dastuurka KMG ah dib ugu celin doonto Guddiga Farsamo ee Fududeynta Howlaha (Technical Facilitation Committee), Guddigaasoo ah Guddiga leh mas’uuliyadda u bandhigidda Ergada Ansixinta ee Qabyo-qoraalka Dastuurka KMG ah.